Polandball, owaziwa ngokuthi countryball, iyinhlangano ngumsebenzisi meme Intanethi eladabuka on the / int / ibhodi imageboard German Krautchan.net engxenyeni yokugcina ka-2009. The meme kubonakala inqwaba amahlaya online, lapho amazwe ethulwa njengoba eyindilinga persona s ukuthi uxhumana in English ngokuvamile ephukile, wahlekisa eyeqisayo kazwelonke kwamaZwe, kanye izingxabano historical. Isitayela zamahlaya kungenzeka idluliselwe kokubili ngokuthi Polandball kanye countryball.
Polandball elisuka an August 2009 "cyberwar" phakathi Polish abasebenzisi Internet kanye nalo lonke izwe on drawball.com. The website, alinikela ngendwangu virtual, kuvumela abasebenzisi Internet ukudweba noma yini abayifunayo, futhi ukudweba phezu imidwebo abanye. On the Internet Polish, umqondo wavuswa ukudweba ifulege Polish ibhola, futhi izinkulungwane nabasePoland ndawonye wakwazi ukuthatha drawball nge umdwebo elimhlophe phezulu ebomvu, ne elithi "Polska" ebhalwe phakathi. Ngemuva ukudidiyelwa kusuka 4chan, lokhu ke ngikumboze by a swastika giant.
Krautchan.net kuyinto imageboard ulimi German-ogama / int / ibhodi evame ukukhuluma isiNgisi s netizen. Ukuqala meme Polandball udumo ku Falco, umsebenzisi British on / int, ubani September 2009 wadala meme usebenzisa MS Paint ngendlela apolitical ukuba Troll Wojak, a Pole ebhodini obufanayo kunomthelela in English ephukile, emva okuyinto Polandball opopayi abangu ngomdlandla edonswa baseRussia.
Emakhomiki Polandball ingabi abalobi kuchazwa, futhi ubani uyakwazi ukwenza omunye. Lokhu kuye kwaholela meme lokusakaza emasayithini ezehlukene kwi Internet, kuhlanganise Reddit. Amahlaya ingatholakala ibuye on Facebook, lapho izwe ngalinye page yayo siqu, ezifana USAball and UKball.
2.1. Izihloko Poland
The kwesisekelo of Polandball, eyathandwa in ukuthandwa ngemva the crash in smolensk ebulale President Polish Lech Kaczyński, ingabe sifanekisela Poland nomlando, ubudlelwano namanye amazwe kanye ngemibono s, ukugxila Megalomania Polish futhi izakhiwo kazwelonke. Ngaphandle abakhuluma isiNgisi ones, ekuxhumaneni phakathi countryballs bavame ukuba kubhalwe ngesiNgisi ephukile futhi slang Internet, okusikhumbuza meme lolcat, futhi ekupheleni the cartoon Poland, okuyinto ngamabomu emelelwe red phezu white the ukuhlanekezela of the flag Polish, ngokuvamile ngimbone ukukhala.
Kuphakame Ezinye amahlaya Polandball kusukela embonweni wokuthi Russia ingandiza emkhathini, kanti Poland can not. Omunye ethandwa kakhulu Polandball opopayi luqala embonweni wokuthi Earth iyokwenziwa eshaywa Meteor giant, okuholela wonke amazwe ubuchwepheshe isikhala beshiya Earth bangena orbit emhlabeni. Ekupheleni the cartoon, Poland, namanje emhlabeni, uyakhala, futhi English ephukile umemezela zeBhayibheli Polandball ngamazwi akhangayo "Poland bengayi emkhathini". Ngale ndlela ezihlekisayo, amaRashiya wafaka nse yonke ingxoxo nabasePoland on kuliphi izwe ungcono. Kwesinye yamahlaya Polandball okuyinto delves zibe uvuthondaba mlando nezombangazwe, Poland libonakala boring ezinye countryballs, kanye isimemezelo lwaso "Ngakho lapho thina nechobozekile Russia nabaseTurkey base izwe enkulu kunazo zonke emhlabeni zaba. futhi. ", okuholela ezinye countryballs ehlekisayo kuso. Poland, manje acasuke, iyezwakalisa kurwa, futhi uphakamisa uphawu ethi "Internet msebenzi obalulekile", okuyinto isiqubulo internet esetshenziswa usulu abanye abaphatha izifundo ngokwedelela, futhi Polandball umhlangano, eqeda by ekhala.
2.2. Izihloko Amanye amazwe
Polandball kuhlanganisa amahlaya kwamanye amazwe, kodwa by umhlangano la amahlaya ngokuvamile namanje ukubizwa ngokuthi Polandball, nakuba zingabuye futhi abizwe countryballs. Amazwe nazo emelelwe balls, nakuba Singapore uthatha uhlobo unxantathu futhi ubizwa ngokuthi Tringapore; the Empire German of 1871-1918 on Facebook nakwezinye izindawo noma theory Fourth Reich on Reddit iyinhlangano isikwele abade ngamehlo amancane futhi njengoba Reichtangle eyaziwa; Israel uthatha uhlobo a hypercube ngokuthi Israelcube in reference to physics Jewish; futhi Kazakhstan uthatha uhlobo isitini okuthiwa Kazakhbrick. Ngaphezu kwalokho, America umdlalo a pair of shades kanye United Kingdom ogqoka Ilensi eyodwa futhi isigqoko top.
Asetshenziselwa Cue amabhola 1 kuya ku-8 ukumela amaqembu ezizwe zendabuko ngaphandle ubuzwe ethile. Ngokwesibonelo, ibhola 1 yellow umele East base-Asia, 7 ibhola maroon umele aboMdabu baseMelika kanye 8 ball black simele Afrika noma abantu abamnyama jikelele. Akunakwenzeka Ukuthi Kunezidalwa Kwamanye Zimelela ibhola 6 green.
The lula Polandball, wanezela ukwazisa kwalo ngomlando wezwe kanye focus on ezindabeni zamanje, kwenza meme ezifaneleke sikhulumela izenzakalo international. Phakathi izenzakalo okuye ehlanganiswa Polandball futhi Kuye kwaphawulwa abezindaba, kukhona umbango Senkaku Islands, 2013 conclave opapa obonile Jorge Mario Bergoglio kokukhethwa njengoba uPapa omusha, bomnotho 2014 Ukrainian, obumbi 2014 YaseCrimea nezindaba eziphathelene abasebenzi Filipino in Taiwan.
A umbiko Vesti FM kusho post on LiveJournal ngalo wabuza abafundi uhlu izithombe emihlanu efika engqondweni lapho ucabanga Poland noma nabasePoland. Amakhasi emihlanu izimpendulo, efanekisa ubuhlobo obujulile zomlando phakathi Russia and Poland, wakhumbula izihloko kuhlanganise False Dmitriy I, Tomek in the Land of the Kangaroos by author Polish Alfred Szklarski, Czterej pancerni i ophaya "Four tank-amadoda inja", Russophobia and Polandball.
Wojciech Oleksiak, ngokubhala culture.pl, a project of the okuxhaswa uhulumeni Polish Adam Mickiewicz Institute okuyinto has ngenhloso ekuthuthukiseni ulimi kanye namasiko phesheya Polish, yaphawula ukuthi ngenxa ubani ukukwazi ukwakha yamahlaya Polandball, khona meme uye wadala amathuba amasha abantu ukuba baveze imibono yabo siqu uhlanga, inkolo kanye nomlando. In echaza Polandball njengesibonelo of ubuhle par on the Internet, yena waqhubeka wathi iziza yamahlaya kungaba "siluhlaza, ukudelela, zobandlululo, bahlukumeza abanye, noma nje plain ngesidomu, ngenkathi futhi ephawula ukuthi uhlobo kwezombusazwe kabi osomahlaya add to the elikhangayo of the meme.
Ngesikhathi esifanayo, Oleksiak uphawula ukuthi Polandball amahlaya ngokuvamile basebenzisa ethonywe nehaba Polish, ezifana nabasePoland singakhathazeki ngokuthi olimini English njengoba kwezinye izizwe, futhi Poland ngokwalo liwumkhiqizo izwe egcwele buthuntu-witted psycho-amaKatolika. Ngakolunye uhlangothi, abanye eyeqisayo abaqashwe Polandball amahlaya, njenge nabasePoland nokuxoxa izindaba ngomlando isizwe sika ezikhazimulayo ehlala on a martyrdom ejulile, Ngokuvamile weqiniso, kanti ngemibono ukuthi nabasePoland ubambe izakhiwo eziningi kazwelonke usola ezibumbeneko zangaphandle yawo ukwehluleka kuyiqiniso, kodwa ngandlela-thile kuthethelelwe.
Oleksiak amanothi eyengeziwe kusukela Polandball, nabasePoland bangafunda ukuba ukuncokola mayelana eside isikhathi sethu amagqubu ".